Lambarka Moodalka XYGL2
Mashiinkaani wuxuu ka kooban yahay shaandhada faashadda waraaqda iyo kala-soocayaasha birlabta oo wuxuu isku daraa faa'iidooyinka labada mashiin.Marka lagu shaqeynayo qaybaha shaqada magnetic-ka ee qalabka wax shiidaya, adeegsiga ayaa mudnaanta siin doona mashiinkan.
1.Qafaxad yar, buuq yar, adeegsiga tamarta oo hooseysa.
Kala-shaandheynta laba-laabka ah ee dheecaanka jarista, kordhinta nolosha adeegga dheecaanka, iyo hagaajinta tayada mashiinnada qaybaha shaqada.
Kala-sooca magnetic-ka ayaa lagu darayaa iyada oo ku saleysan miiraha faashadda warqadda. dareeraha qaboojinta ee Booqday Furimaha Dagaalka ayaa marka hore raacaya shaandhada-baandhada shaandhada marka hore, ka dib SEPARATOR magnetic wuxuu kala saaraa wasakhda magnetic ka dareeraha qaboojinta Wasakhda aan magnet-ka ahayn ee dareeraha qaboojinta ku qulqulaya suunka warqadda miiraha, ka dibna miiraha warqaddu kala saaro wasakhda aan-ferromagnetic ahayn. Dareeraha qaboojinta ka dib marka la sifeeyo waxaa loo isticmaalaa qalabka mashiinka ee lagu dirayo bamka wiishka. Marka la barbardhigo miiraha faashadda waraaqaha, miiraha waraaqda magnetic-ka ayaa yareyn kara isticmaalka warqadda miiraha waxayna yareyn kartaa qiimaha. Qalabkan waxaa badanaa loo isticmaalaa dhammaan noocyada mashiinnada wax shiida. Mashiinku waa qurux badan yahay, oo qaab dhismeedkiisu kooban yahay. Adoo adeegsanaya mashiinkan, waxaan yareyn karnaa wasakheynta deegaanka, hagaajinta saacadaha shaqada ee wax ku oolka ah, waxaan yareyn karnaa xoogga shaqaalaha ee mashiinka mashiinka. Waxay sidoo kale kordhisaa dusha sare ee qalabka shaqada waxayna hagaajisaa tayada alaabada.
Si loo doorto nooca moodalka ah ee lagu go'aaminayo qulqulka makiinadda, intaa waxaa sii dheer, waa in la tixgeliyaa dhererka gadaal gadaal iyo meel lagu rakibo. Miiraha balastarka waraaqaha magnetic-ka ayaa sidoo kale rakibi kara kala-gooyaha shanlada, si uu ula wadaago kala-soocayaasha shanlada. Marka loo eego cabbirka rakibidda, haddii alaabooyinka caadiga ah aysan sax ahayn, waxaan uga dhigi karnaa sida aad u baahan tahay.
Hore: Taangiga qaboojinta caanaha, mashiinka caanaha
Xiga: Qalabka mashiinka loo yaqaan 'magnetic chip'